ကုန်ပစ္စည်း Parameters Feature 1). Box ကိုအရွယ်အစား: သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုအဖြစ်စိတ်ကြိုက် 2). ထုပ်ပိုး: client ကိုတောင်းဆိုချက်အရသိရသည် 3). ပစ္စည်း: မြှောင်းပုံစက္ကူ, Artcard စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, အဖြူဘုတ်, kraft စက္ကူ, သစ်သားမဲ့စက္ကူ coated စက္ကူ,paperboard နှင့်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှုန်းအဖြစ်. 4). ကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်း: 4-အရောင် offset ပုံနှိပ်, သို့မဟုတ် Pantone ပုံနှိပ်ခြင်း, ဖောက်သည်၏ကမ်းလှမ်းချက်အရ…
Size According to Customers’ specific requirements Printing 1C-4Colours /offset printing Art Paper 128gsm - 400gsm Kraft Paper 80gsm - 250gsm ဖန်စီစက္ကူ 110 gsm - 230GSM Cardboard 800gsm, 1000gsm, 1200gsm, 1500gsm 1800gsm EVA ထည့်ပါ, အမြှုပ်နှင့်ပိုး. ကတ္တီပါ, ကတ်ထူပြား, ပလတ်စတစ်အချောသတ်ခြင်း, Glossy Lamination, Matt Lamination, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, Hot Stamping ထုပ်ပိုးခြင်းထုတ်ကုန်များသည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်ပုံးများ (သို့မဟုတ်) ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုပ်ပိုးထားသည်3အလွတ်နမူနာအတွက်ရက်, within7days…
အသွင်အပြင် 1). Box ကိုအရွယ်အစား: သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုအဖြစ်စိတ်ကြိုက် 2). ထုပ်ပိုး: client ကိုတောင်းဆိုချက်အရသိရသည် 3). ပစ္စည်း: မြှောင်းပုံစက္ကူ, Artcard စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, အဖြူဘုတ်, kraft စက္ကူ, သစ်သားမဲ့စက္ကူ coated စက္ကူ,paperboard နှင့်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှုန်းအဖြစ်. 4). ကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်း: 4-အရောင် offset ပုံနှိပ်, သို့မဟုတ် Pantone ပုံနှိပ်ခြင်း, according to customer's offered artwork 5). Option: Glossy & Matt Lamination; Glitter power; Golden/Silver Hot-stamping…
Item Name 1000pcs MOQ China Wholesale Customised Vintage Handmade Coxmetic Box for Skin Care Cream MOQ 1000pcs Feature 1). Box ကိုအရွယ်အစား: သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုအဖြစ်စိတ်ကြိုက် 2). ထုပ်ပိုး: client ကိုတောင်းဆိုချက်အရသိရသည် 3). ပစ္စည်း: မြှောင်းပုံစက္ကူ, Artcard စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, အဖြူဘုတ်, kraft စက္ကူ, သစ်သားမဲ့စက္ကူ coated စက္ကူ,paperboard နှင့်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှုန်းအဖြစ်. 4). ကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်း: 4-အရောင် offset ပုံနှိပ်,…